Android App rakibayo - Easy si loo soo dajiyo barnaamijyadooda si ay Android ka PC
> Resource > Android > Android App rakibayo: fududahay in la rakibo / Dhoofinta / uninstall Apps in Android ka PC
"Waxaan jeclahay inaan download barnaamijyadooda qaar ka mid ah ee aan telefoonka Android on my computer markii aan soo gaarto qaar laga daadiyo fiican talinayaa intii aan website arkaysid. Laakiin marka aan joogo dhammeeyayna ay la shaqadayda oo doonaya in ay isku dayaan in barnaamijyadooda kuwa, anigu garanba maayo sida loo sameeyo rakibo si aan telefoonka Android. Waxaa wax laga xumaado, in iyaga tuur oo dhan Thanks.! "
Waxaad dhab ahaan ma u baahan tahay inaad iska tuur kuwa barnaamijyadooda soo bixi on your computer, oo halkaas waa hab sahlan oo aad ku iyaga oo dhan loo soo dajiyo si ay telefoonka aad Android kaliya hal click.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa app rakibayo Android awood badan: MobileGo Wondershare . Marka aad user Mac ah, fadlan isku day Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Fiiro gaar ah : In hage soo socda, waxaan ku tusi doonaa sida loo rakibi / dhoofinta / uninstall files APK ah ee aad taleefan Android ama kiniin ah iyadoo la kaashanayo this app rakibayo Android awood leh daaqado - Wondershare MobileGo. Dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah marka la isticmaalayo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac).
Riix halkan si aad u ciyaaro tutorial video ku saabsan sida loo rakibi / dhoofinta barnaamijyadooda / uninstall arrintan app rakibayo Android ah.
Orod app rakibayo, waayo, Android on your computer. Markaas, xirmaan telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ah, ama iyada oo Wi-Fi. Kaliya dooro sida aad jeceshahay. Oo markaas ka dibna tag "Apps" tab, halkaas oo aad si aad computer ku rakiban kartaa barnaamijyadooda ka PC, barnaamijyadooda uninstall ka telefoonka aad Android, xitaa barnaamijyadooda dhoofinta.
Ku rakib barnaamijyadooda aad ka PC in Android
Halkan waxa aad ka ogaan kartaa sida loo soo dajiyo app ee Android via PC. In uu furmo suuqa hoose, dhammaan barnaamijyadooda aad ku rakiban waxay ku qoran yihiin "Apps" guddiga. Guji "rakib" in ay dajiyaan oo dhan files APK aad soo bixi ama ay wadaagaan saaxiibadaa sidoo kale in ay Card ee SD ama Phone Kaydinta. Markaas dhammaan faylasha lagu rakibi doonaa si telefoonka aad Android mid mid. Marka uu dhamaado, waxaad ka heli doontaa dhammaan barnaamijyadooda si fiican u rakiban telefoonka.
Dhoofinta barnaamijyadooda aad ka Android inay PC
Ma aha oo kaliya ku rakibidda barnaamijyadooda ka your computer si Android phone, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa app rakibayo Android inay u dhoofiyaan barnaamijyadooda aad si aad u computer ah. Waa mid aad u fudud. Dooro Chine in aad rabto in aad u dhoofiyaan, ka dibna ku dhuftay on "Dhoofinta" iyo dooran meel ay ku kaydi. OK. Waxa ay la dhoofiyo si aad u computer hadda iyo saaxiibadaa si fudud aad iyaga la wadaagi karto.
Uninstall aad Chine ee Android
Haddii aad rabto in aad u maamuli lahaayeen barnaamijyadooda iyo ka tago oo kaliya kuwa aad jeceshahay, inaad ka dhammaan karto oo dhan barnaamijyadooda la rabin la mid click. Dooro kuwa aad dooneyso in aad ka saarto, oo ka dhacay on "uninstall". Markaasaa barnaamijyadooda xulay dhammaantiis la saari doonaa telefoonka. Waxaad dooran kartaa in aad iyaga uninstall mid mid, ama iyaga oo dhan uninstall hal mar.
Waa maxay dheeraad ah, taas software ugu wanaagsan ee ku rakibidda codsiga Android kombiyuuterada laptop samayn kartaa waxyaabo badan oo, sida Chine Android download via computer , dib iyo wareejiyo aad Xiriirada, SMS, music, filimada iyo sawirada u dhexeeya aad telefoon iyo kombiyuutarka. Waa arrin ku xigeenka weyn telefoonka Android / kiniin. Just download it hadda oo aad u sahlan si aad u maamusho content Android!